The Ab Presents Nepal » भाेजपुर घटना बारे सांसदले मागे गृहमन्त्रीसँग जवाफ !
भाेजपुर घटना बारे सांसदले मागे गृहमन्त्रीसँग जवाफ !
काठमाडौं -: भोजपुरमा भएको भि*डन्त र मृ*त्युको विषय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उठेको छ। कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले भोजपुर घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्रनाथ खनालबाट विवरण राख्न माग गरेकी हुन्’।
उनले प्रश्न गरिन्,यो संवेदनशील विषय हो। सुरक्षा व्यवस्था के भइरहेको छ? भोजपुरमा भिडन्त भयो र मान्छेको मृत्यु भएको कुरा उठेको छ, वास्तविकता के हो? समितिमा गृहमन्त्री थापा, गृहसचिव प्रेम राई, प्रहरी महानिरीक्षक खनाललगायत सुरक्षा अधिकारीको उपस्थिति छ। समितिमा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ’।
बुधबार बिहान भोजपुरको सदरमुकाममा प्रहरी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताबीच गो*ली हा*नाहान हुँदा दुई जनाको मृ*त्यु भएको छ। मृ*त्यु हुनेमा घुमुवाका रूपमा सक्रिय प्रहरी जवान सञ्जीव राई र विप्लव समूहका कार्यकर्ता नीरकुमार राई रहेका भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अघिकारी नुरहरि खतिवडाले जानकारी दिए’।